mairie-antananarivo – Fankalazana ny faha 10 taonan’ny CLAM
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany teto amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fankalazana ny faha folo taonan’ny CLAM “Consortium des Laboratoires Agro Alimentaires de Madagasikara” izay manana anjara toerana lehibe amin’ny fikatsahana sy fanatsarana ny kalitaon’ny Sakafo, ny fitantanana sy fanarahamaso izany. Marihana fa maharitra 2 andro ity fankalazana ity ary misy ireo hetsika fampiratiana samihafa mandritra izany.
Nisolo tena ny Ben’ny tanànan’Antananarivo tamin’izany ny Lefitra voalohany Andriamatoa Ramboasalama Emilien, sy ireo olo-manankaja maro avy amin’ny Ministera isan-tsokajiny, ny birao misahana ny fanaraham-penitra sy ireo fikambanana samihafa.
Nosantarina tamin’ny fampiofanana ireo mpivarotra hani-masaka miisa 700 eo anivon’ny Boriboritany 6 moa ny fiaraha-miasa eo amin’ny BMH “Bureau Municipal d’Hygiène” sy ny CLAM tamin’ity taona ity, mbola hitohy ny ezaka ka tokony hanaraka ny toromarika avokoa ireo mpanao hani-masaka ireo mba ho fitsinjovana ny fahasalamanan’ny mpanjifa araka ny voalazan’ny talen’ny BMH na ny Fahasalamana Herivonona Durand Deris.
Marihina moa fa misy ny fitsipika voasoratra mazava tsara ao anatin’ny “Code Municipal d’Hygiène” izay hiroson’ny Kaominina tsy ho ela ny fampiharana azy.